10 Uninzi Iidolophu Coastal Beautiful EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Uninzi Iidolophu Coastal Beautiful EYurophu
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 15/01/2021)
NgoLwandlekazi lweAtlantic kwelinye icala kwaye iidolophu ezintle kakhulu kwelinye, i 10 eyona iidolophu ezintle zonxweme eYurophu zezona kwiindawo zokufumana iholide ekhululekile kwaye alibaleke. Ukuphumla emaweni, umamele amaza olwandle, Ukuntywila emanzini olwandle acwengileyo, okanye ukufumanisa iintsomi ngasemva kwamazibuko kunye neenqaba, ngamava awodwa oza kuwafumana kuphela kunxweme lwase-Itali, Fransi , naseNgilani.
1. Idolophu entle yoNxweme e-Itali: Truck Coast
Izindlu ezidumileyo ezijonge uLwandle lwaseTyrrhenian lwedolophu yaseAmalfi zipositi-zilungile. ngoko ke, I-Amalfi igqwesa zonke iidolophu eziselunxwemeni njengeyona dolophu intle yonxweme e-Itali. Ukwengeza, uya kufumanisa ukuba yeyona ndawo iphuphayo ehlobo eYurophu. Oku kubulela kumanzi aluhlaza ngokuchasene namawa, kunye nezindlu ezimibalabala ezenza indawo efanelekileyo yokubaleka elwandle.
Ngaphezu, ukuba unqwenela ukufumanisa ngakumbi, ke Amalfi Cathedral kunye villa Rufolo, unikezela ngombono omangalisayo woLwandle lweMeditera kunye negadi. kunjalo, Ukuqaqanjelwa kwe-Amalfi yi 40 imizuzu’ ukuqhuba ukusuka eVietri Sul Mare ukuya ePositano kunye nezinye ze uninzi lweembono ezimangalisayo zonxweme.
2. Eyona Dolophu yoNxweme iCharming eFrance: ENgcwele-Malo
Ngelixa uSaint-Tropez noNice bekhona 2 kwiidolophu ezidumileyo zonxweme eFrance, ISaint-Malo eBrittany kumjelo wamaNgesi lulunxweme gem efihliweyo. Oku kubulela kwimbali etyebileyo kunye namabali awenzeka kunxweme lwaseSaint-Malo. KwiSaint-Malo, uya kubuyela emva kumaxesha eepirate, kunye neeCorsairs zaseFrance, ukulwa kunye nokukhusela iGrand France kwiiramparts.
namhlanje, Iirandi zeSaint-Malo ziyamangalisa ngokuhambahamba kwidolophu yakudala, admiring the sunset, nokujonga amaza. Ukuxabisa ngokupheleleyo umtsalane weSaint-Malo kuya kufuneka uhlale ubusuku kwaye undwendwele iziqithi zeGrand Be kunye nePetit Be forts.
3. Idolophu entle yoNxweme eYurophu: Lerici, ElamaTaliyane
Ababaninzi abakhe beva ngedolophu yaseLerici kwi-Riviera yase-Itali, enye yeedolophu ezintle kunxweme lwaseYurophu. Idolophu ekumazibuko e-La Spezia inokuba sisiqalo kuyo uhambo lwakho eCinque Terre, kodwa uLerici unomlingo wakhe ongaziwayo. Uya kumfumana uLerici 8 Iikhilomitha kumazantsi mpuma eLa Spezia, enezindlu ezipeyintiweyo, iikopi, izibuko, inqaba yenkulungwane ye-12 ejonge elwandle, iimbono ezimangalisayo, yaye bentaba ecaleni konxweme.
Ngaphezu, ILerici yindawo entle yesiseko sohambo lwakho oluya kunxweme lwase-Italiya: ICinque Terre entle, Portofino, kunye nePortoverane. Unokwenza uhambo losuku ukuya ePisa ethandekayo.
4. Idolophu entle yoNxweme eFrance: ICassis-Marseille
Iliwa lekalika, amanzi acocekileyo acocekileyo, iimbono zepanoramic zonxweme ukusuka kwiivenkile zendlela, yenza iCassis ibe yeyona dolophu iselunxwemeni. ICassis imi phakathi kwelona litye lide kunxweme lwaseYurophu, Cap eKanaille, kunye nelitye lekalika elimhlophe Calanques. Ngaphezu, kwiCassis, uya kufumana ezona zilungileyo kuwo onke amazwe – Provence izidiliya, kunye noLwandle oluhle lweMeditera.
Sipping kwiglasi yewayini iRose, ukubukela abalobi, iya kuba yeyona nto iphambili kwikhefu lakho kule dolophu iselunxwemeni yomlingo. Le gem efihliweyo yaseFransi kukukhwela uloliwe kude neMarseille, kunye nokubaleka okugqibeleleyo kwisixeko esixakekileyo.
EParis ukuya eLa Rochelle Kunye noLoliwe
Idume ngokufika eNormandy, I-Arromanches yidolophu entle eselunxwemeni kwingingqi yeNormandy eFrance. Ngokuchasene nenqaku lomkhosi kwakuba njalo, namhlanje uya kufumana idolophu entle yaselwandle kunxweme lweAtlantic.
ngoko ke, ulungele iholide engalibalekiyo elwandle, ngokuntywila emanzini, kwezikhephe, ukukhwela ihashe kunxweme lwegolide, nokuhlamba ilanga. Yimpelaveki emfutshane okanye ende, uyakonwabela ulwandle ngeArromanches-Les-Bains’ 550 abemi, kunye namava Umlingo waseNormandy.
6. yaseCornwall, England
Unxweme lwaseCornish lolulela ku 679 Iikhilomitha zamawa, imiqolomba, namanxweme. Oku kongeza kubume baseCornwall njengeyona dolophu intle yokusefa e-UK. ke, ukuba ucwangcisa ukongeza imisebenzi yemidlalo yamanzi kwiholide yakho ngaselwandle, ICornwall igqibelele.
Eyona dolophu intle yonxweme eGreat Britain sisiqithi esihle. ngoko ke, naphi na apho ujika khona, uya kuzifumana ume elunxwemeni olumangalisayo. Eyona mbono ibalaseleyo yolwandle lwaseCornwall kunye nonxweme, ungahamba indlela yoNxweme lwase Mzantsi Ntshona.
7. Idolophu yaselunxwemeni yaseFonfleur eFrance
Ukuba ujonga eyona dolophu iselunxwemeni eFrance, ke Honfleur impendulo. Kwindawo yokuhlangana yomlambo iSeine kunye nolwandle, Cruises umfula, izindlu ezimibalabala ezibonisa ulwandle, kwaye uhamba ngaselunxwemeni, yenza i-Honfleur enye ye 10 ezona dolophu zintle zonxweme eYurophu.
Ngo-Okthobha lelona xesha lilungileyo lokuhamba kwaye uyonwabele i-marina kunye nolwandle umoya omtsha e-Honfleur. Iya kuba yindlela entle yokuvalelisa ihlobo kwaye uthambise ilanga kwaye uphephe ukufuma, kunye nezihlwele zabakhenkethi.
EParis ukuya eCalais ngoLoliwe
Rouen ukuya eCalais ngoololiwe
8. ISanta Cesarea Terme e-Itali
ISanta Cesarea Terme yidolophu entle eselunxwemeni ePuglia. Ukujongana nolwandle, uya kufumana ukonwabela ulwandle oluhle kwaye amabhafu ashushu kwiholide yakho yase-Itali.
Ngokwahlukileyo kwezinye iidolophu eziselunxwemeni ezimibalabala e-Itali, ISanta Cesarea yahlulahlulwe yiyo Uyilo lwamaSilamsi. Ithetha ukuba, Villas ezimhlophe ezintle kunye neenqaba ezirhangqe idolophu, kwaye ujongeka umhle ngokupheleleyo ngolwandle oluhlaza okwesibhakabhaka. Ukuba uthatha isigqibo sokundwendwela le dolophu intle ingaselunxwemeni, unokuba nethamsanqa ngokwaneleyo ukuba uhlale kwenye yeenqaba ezininzi eziguqulweyo-iihotele edolophini.
Naples ukuya eBari ngololiwe
Bari ukuya kwiFasano ngoLoliwe
ENaples ukuya eFasano ngololiwe
9. Ibrugge (wasebenzisa), Bheljiyam
Idolophu endala yeBrugge yenye yezona zininzi iziko elidala elinomtsalane eYurophu. I-Brugge ikwaphethe isihloko njengenye ye 10 ezona dolophu zintle zonxweme eYurophu. Imingxunya ngaselwandle yinto entle emehlweni, ngemijelo yayo, izikhephe, kunye nezindlu ezintle.
Ngonxweme oluhle, Akumangalisi ukuba ookumkani abaninzi beFlemish bakhethe, Ibrugge njengekhaya labo. ngoko ke, Kuya kufuneka ulilungele elona nani likhulu leenqaba kunye neenqaba ezijonge elwandle.
IAmsterdam ukuya kwiBruges ngololiwe
I-Antwerp kwiBruges ngoLoliwe
IGhent kwiBruges ngeTreyini
10. Venice, ElamaTaliyane
Isixeko esihle saseVenice sivale 10 ezona dolophu zintle zonxweme eYurophu uluhlu. Uyilo loyilo, gelato, yaye ekhwela umkhumbi yenza iVenice indawo ephuphayo elwandle.
IVenice ihlala elwandle, Kungenxa yoko le nto iyidolophu yokugqibela yonxweme kuyo yonke iYurophu. AmaTaliyane ayayithanda iVenice, nabakhenkethi bayayithanda nayo. Uya kuba nexesha elimangalisayo lokujikeleza ujikeleze iindlela kunye nezitalato ezimxinwa.
Apha e Gcina A Isitimela, siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo lwakho ukuya "10 Uninzi Iidolophu Coastal Beautiful EYurophu".
Ngaba ufuna ukufaka i-post yethu yeblogi "I-10 yeeDolophu eziNhle kakhulu eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeautiful-coastal-towns-europe%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)